'लुसी इन द स्काई विथ डायमन्ड'- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
'बिटल्स' को एउटा गीत र मानवको आदिपुर्खाको यस्तो कथा जसलाई अनौठो संयोगले जोडेको छ ।
वैशाख ७, २०७६ सुरेश ढकाल
संयोग एक सन् ६० को दशकको सम्भवतः सर्वाधिक लोकप्रिय सांगीतिक समूह थियो ‘बिटल्स’  । १९६७ मा ‘बिटल्स’ ले एउटा गीत रेकर्ड गरायो, ‘लुसी इन द स्काई विथ डायमन्ड  । जोन लेननले लेखेको र संगीतबद्ध गरेको यो गीत उनीहरूका अरूजस्तै हिट भयो ।
हिट मात्र भएन, यो गीतलाई बीबीसी रेडियोले प्रतिबन्धसमेत लगायो । संयोग के पर्‍यो भने यो गीतमा प्रयुक्त शब्दहरू ‘लुसी इन द स्काई विथ डायमन्ड’ को पहिलो अक्षरहरू एलएसडी हुने रहेछ । एलएसडी (लाइसेर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड) लाई एक मनोभ्रामात्मक अवस्थामा पुर्‍याउने लागूऔषध (ड्रग) को रूपमा लिइन्छ । प्रतिबन्धित एलएसडीको कुख्याति त्यसबेला चरममा पुगेको थियो । निराशा र गन्तव्यहीनताबाट पिरोलिएका साथै केही आक्रोशी र प्रतिरोधी युवासमेत यसको लतमा परेका थिए । दिग्भ्रमितलाई नै हो थप दिग्भ्रमले आनन्द दिलाउने । लठ्ठ, मस्त, मदहोसी, बेहोसीमा मनमगन र बिन्दास भएर बस्नेहरूका बीच त यो गीत लोकप्रिय हुने नै भयो ।
मेरा एक छिमेकी थिए । मभन्दा केही वर्षले नै जेठा । उनी सायद निराशा र निस्सारताबाट मुक्त हुने बहानामा एलएसडीको कुलतमा परेका थिए । उनी भन्थे, ‘एक पटक स्वाट्ठ तानेर मस्त आँखा चिम्लेपछि लन्डन भने लन्डन, पेरिस भने पेरिस पुगिन्छ ।’ जसरी ‘बिटल्स’ का गीत नेपालमा लोकप्रिय हुँदै थिए क्रमशः नेपाली युवाहरूमाझ एलएसडी पनि । यद्यपि यी दुईबीच कुनै सोझो तादात्म्यता भने थिएन । दुवैको लोकप्रियतामा कुनै तादात्म्य थियो पनि कि ? जोन लेननले भने पटक–पटक यसलाई अस्वीकार गरे । त्यति हुँदाहुँदै पनि यो गीत समावेश भएको एल्बम ‘सर्जेन्ट पेपर्स लोन्ली हार्ट्स क्लब ब्यान्ड’ बजारमा आउनुअघि नै बीबीसी रेडियोले गीतलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो, माथिकै कारणले ।
खासमा यो लिविस क्यारोलको बाल उपन्यास ‘एलिस इन द वन्डरल्यान्ड’ मा वर्णन गरिएको केही भ्रामक यथार्थ वा अद्भुतखाले परिकल्पनामा आधारित गरेर तयार गरिएको थियो । गीत यसरी बालबालिकाका लागि लेखिएको कथामा आधारित हुनु कुनै संयोग भने थिएन । लेनन किताबको अद्भुत काल्पनिकीबाट प्रभावित थिए । लेननका तीनवर्षे छोरा जुलियनको नर्सरी स्कुलको चित्र, जसलाई ऊ लुसी– इन द स्काई विथ डायमन्ड भन्थ्यो, बाट प्रभावित भएर ‘एलिस इन द वन्डरल्यान्ड’ मा वर्णित काल्पनिकीको धरातलमा टेकेर लेखिएको थियो उक्त गीत । यसरी गीत निर्माण हुनु, आरोपित हुनु, प्रसिद्धि पाउनु सब संयोगजस्तै थियो । उक्त गीत संगृहीत एल्बम बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत युरोपका कतिपय देशमा पहिलो नम्बरको हिट बने । उक्त एल्बममा रहेको ‘अ डे इन द लाइफ’ बिटल्सको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट गीतको सूचीमा छ भने लुसी २६ औं सर्वाधिक मन पराइएको गीतमा पर्छ ।
संयोग एक खासमा संयोग दुईको पृष्ठभूमि मात्र थियो । सन् १९९६ मा म पुरातात्त्विक मानवशास्त्रको विद्यार्थी थिएँ, नर्वेको वर्गेन विश्वविद्यालयमा । त्यही बेलामा परिचय भएको हो लुसीसँग पहिलोपल्ट । यो लुसी बिटल्सको उही लुसी थिएन बरु लाखौं वर्ष पहिले नै लोप भइसकेको मानव पुर्खाका एक प्रजातिको प्रतिनिधि थियो । खासमा यिनै विलुप्त मानव पुर्खाले नै ‘बिटल्स’ को लुसीसँग पनि परिचय गराइदिएको थियो । खासै अंग्रेजी गीत नसुन्ने मलाई पनि यो गीत सुन्ने हुटहुटी जागेर आयो । मेरा एक सहपाठी थिए अंग्रेजी संगीतका पनि पारखी । उनकै सहयोगमा उक्त एल्बम किनेर यो गीत सुनेको थिएँ । त्यसअघि ‘बिटल्स’ का केही गीत नसुनेको पनि होइन । त्यस बेलासम्म ‘बिटल्स’ जति सुनिएको थियो त्योभन्दा बढी उनीहरूबारे पढेको थिएँ । त्यसका केही सन्दर्भ र कारणहरू छन्, मौका मिले कुनै बेला लेखौंला ।
यो संयोग दुईको संक्षिप्त पूर्वकथा हो । संयोग दुईको खास कथा भने यस्तो छ । नोभेम्बर २४, १९७४ । मानवशास्त्रका सहप्राध्यापक ३१ वर्षीय युवा डोनाल्ड जोहान्सने एक अमेरिकी–फ्रेन्च पूरा–मानवशास्क्रीहरूको सयुंत्त टोलीको नेतृत्व गर्दै इथियोपियाको आफर प्रान्तमा पर्ने हदर भन्ने स्थानमा पूरा–मानवको अवशेष उत्खननमा व्यस्त थिए । ग्रेट रिफ्ट भ्यालिकै एक अंश यो इथियोपियालीे गाउँ प्राचीन मानव अवशेषको पुरातात्त्विक उत्खननका लागि प्रसिद्ध थियो, छ । ऊक्त दिन डनले अन्वेषण क्षेत्रको एक कुनामा सेता हाडका टुत्राजस्तो केही देखे । त्यो खासमा मानव अस्थिपञ्जरको अवशेषको एक टुक्रा नै रहेछ । उत्खननका क्रममा करिब ४० प्रतिशत जति अस्थिपञ्जर अवशेषहरू जम्मा हुन सक्यो । यो कुनै लोप भैसकेको मानव जातिकै पुरावशेष थियो भन्ने पक्का भयो । उक्त मानवअवशेष त्यस बेलासम्म प्राप्त भएकामध्ये सबैभन्दा पूर्ण थियो । यो उनीहरूका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्राप्ति हुन सक्थ्यो र मानव उद्विकासको इतिहासकै लागि पनि । तत्कालै अन्वेषण टोलीकी एक सदस्य पामेला एल्डरम्यानले उक्त मानव अवशेषको न्वारन पनि गरिदिइन– ‘लुसी’ । लुसी एक स्त्रिलिङ्गी नाम थियो त्यतिबेलासम्म उक्त अस्थिपञ्जरको लिङ्ग पहिचान भइसकेको थिएन । तैपनि यो नाम सबैले स्विकारे ।
यसरी जन्म भएको थियो दोस्रो लुसीको । संयोग के थियो भने त्यस बेला डन जोहान्सनको पाल (क्याम्प) बाहिर उही बिटल्सको ‘लुसी इन द स्काई विथ डायमन्ड’ गीत बजिरहेको थियो । त्यसैबाट प्रभावित भएर पामेलाले उक्त अस्थिपञ्जर–अवशेषको नाम लुसी सुझाएकी थिइन् । भनिन्छ उनीहरूका लागि त्यो दिन उत्सवमय थियो । खुसीले सब मखलेल थिए । त्यो साँझ उनीहरूले पार्टी पनि गरेका थिए । भनिरहन परोइन, त्यो साँझ र रातभर पनि उनीहरूले बिटल्सको ‘लुसी...’ दोहोर्‍याई दोहोर्‍याई बजाएका थिए ।
अर्को संयोग के जुर्‍यो भने ‘लुसी’ नाम दिइएको त्यो अवशेष स्त्रीलिङ्गी नै परेछ । यसको पहिचान ‘अस्ट्रेलोपिथेकस आफरेन्सिस’ भनी निर्क्योल गरियो । आफर भन्ने स्थामा भेटिएकाले यसको नाम ‘आफरेन्सिस’ राखिएको थियो । प्राप्त भएको स्थानको पहिचान झल्कने गरी मानवाशेषहरूको नामकरण गरिने आम चलन नै हो । जस्तै जर्मनीको नियान्डरटल उपत्याकामा पाइएको अवशेषलाई नियान्डरथालेनसिस् वा नियान्डरथल मानव, पेकिङमा पाइएकोलाई पेकिङ मानव । त्यस्तै शिवालिक शृंखलामा प्राप्त मानवअवशेषलाई शिवापिथेकस र हाम्रै बुटवलको तिनाउ नदीमा भेटिएकोलाई बुटौलोपिथेकस भनी नामकरण गरिएको छ । तिनाउ नदीको किनारमा प्राप्त उक्त आदिमानवको बंगारा १ करोड १० लाख वर्ष पुरानो भनिए पनि उक्त अवशेष सतहमा पाइएको थियो न कि कुनै पुरातात्त्विक सन्दर्भबाट उत्खनन गरिएको । तसर्थ यो मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट खास महत्त्वको मानिदैन ।
फेरि ‘बिटल्स’ कै गीतको कुरा गरौं । उक्त गीत रेकर्ड गरिएको सात वर्ष भइसकेको थियो । त्यसबीचमा ब्यान्डका पाँचवटा स्टुडियो एल्बम र झन्डै एक दर्जन कम्पाइलेसन एल्बम निस्किसकेका थिए । ‘लुसी इन द स्काइ...’ को रौनक खुइलिसकेको भने थिएन । ‘बिटल्स’ सुन्ने पुस्ता अहिले पनि यो गीत सुन्छन् होलान् नै । तर, त्यस दिनदेखि प्रसिद्धि कमाउने लुसीचाहिँ त्यही मानव अस्थिपञ्जर अवशेष बन्यो । यसरी डन जोहान्सनले लुसीलाई प्रसिद्ध बनाए र लुसीले डन जोहान्सनलाई ।
आज पनि मानव उद्विकासको अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्नहरूका लागि यो घटना सुखद संयोग मात्र रहेन । ‘अस्ट्रेलोपिथेकस अफारेन्सिस्’ पहिलो मानवपुर्खाको ज्ञात प्रजाति भनि पहिचान गरिएको उक्त दुईखुट्टे मानव अवशेषको प्राप्ति महत्त्वपूर्ण घटना सावित हुन पुग्यो । उनै जोहान्सनले अर्का एक सहकर्मीसँग मिलेर लेखेको पुस्तक ‘लुसी ः द बिगिनिङ अफ ह्युमनकाइन्ड’ ले अमेरिकी ‘नेसनल बुक अवार्ड इन साइन्स’ पायो । जोहान्सनले यी बितेका साढे चार दशक उनै लुसीको कथा लेखन र पुनर्लेखन गरेर बिताए तर पनि पूर्ण कथा भने अझै लेखिइसकेको छैन ।
जोहान्सन मानव उद्विकासको इतिहास लेखनमा यति तल्लीन भए कि उनले इन्सिच्युट अफ ह्युमन ओरिजिन्स भन्ने संस्थासमेत स्थापना गरे । ७६ वर्षीय यी मानवशास्त्री आजपर्यन्त लागिपरेकै छन् लुसी र आफ्नै बीचको नाता सम्बन्ध खुट्याउन । अर्थात् उक्त विलुप्त प्रजाति ‘अस्ट्रेलोपिथेकस अफरेन्सिस्’ कसरी आजको आधुनिक मानवसम्म विकास भयो होला भनेर थाहा पाउन । यो प्रश्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने मानवजातिको विगतबारे जति थाहा पाउन सकिन्छ उसको भविष्यको बारेमा पनि त्यत्ति नै धेरै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
मानवशास्त्रीहरूले के तथ्य उजागर गरिसकेका छन् भने अनुमानित ३२ लाख वर्ष पुरानो उक्त मानव पुर्खा करिब साढे ३ फिटदेखि ४ फिटसम्म अग्लो र ७५ पाउन्ड जति तौल भएको, दुई खुट्टाको भरमा सीधा उभिन सक्ने थियो । ऊ शाकाहारी थियो र दिमागी आकार हालको चिम्पाञ्जीको भन्दा ठूलो थियो । अर्का मावनशास्त्री रेमन्ड डार्टको ‘अस्ट्रेलोपिथेसाइन’ दुई खुट्टामा उभिएर सीधा भएर हिँड्न सक्थे भन्ने सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्नसमेत यो तथ्यले बल पुर्‍यायो भनिन्छ । अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूको एक वर्ष लामो यात्रापछि अहिले लुसीको स्थायी बसोबास इथियोपियाको संग्रहालयमा भएको छ ।
यी दुई लुसीको जन्मलाई किन पनि संयोग भनियो भने यदि लेननका तीनवर्षे छोरा जुलियनको नर्सरी चित्रको शीर्षक त्यो नहुँदो हो त न बिटल्सको गीत बन्थ्यो न हाम्रा आदि पुर्खाले उक्त नाम नै पाउँथे ।सन् २०१४ मा अमेरिकाको ओहायोमा आयोजित साइन्स राइटर कन्फरेन्समा जोहान्सन सुनाउँदै थिए, ‘कसैले मलाई सोध्दै थिए कि ४० वर्षमा के त्यस्तो फरक पायौ लुसी र तिमीमा ?’ उनको उत्तर थियो, ‘यो एकदम सरल छ । म ऐना हेर्दा थाहा पाउँछु कि म ४० वर्ष बूढो भएको छु, लुसी एक दिन पनि बूढो देखिंदैन ।’ प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०९:२१
धनी ३० क्लबभित्र पनि नपर्ने आयाक्स कसरी ॅजायन्ट किलर’ भएर निस्किइरहेको छ ?
वैशाख ७, २०७६ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — पोर्चुगिज प्रशिक्षक जोसे माउरिन्होको म्यानचेस्टर युनाइटेडले युरोपा लिग २०१७ को फाइनलमा आयाक्सलाई हराएर युरोपेली क्लब फुटबलको दोस्रो ठूलो प्रतियोगिता जितेको थियो  ।
इंग्ल्यान्डको महारथी युनाइटेडका लागि त्यो जित सानदार होइन, विश्वकै सबभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा पुग्ने बाटो मात्रै थियो । आयाक्सको लागि भने दोस्रो दर्जाको प्रतियोगितामा फाइनल पुग्नु पनि नसोचिएको उपलब्धि थियो । फेरि त्यो स्तरको सफलता आयाक्सबाट सोचिएको थिएन ।
स्टकहोम (स्वीडेन) मा फाइनल खेलेपछि डेभिन्सन सान्चेज डेभी क्लासेन प्रिमियर लिग खेल्न इंग्ल्यान्डतिर लागे । पछिल्लोपल्ट जस्टिन क्लाइभर्टले पनि इटालियन सिरी ‘ए’ खेल्ने निर्णय लिए । अरू खेलाडीले अर्को एक वर्ष सँगै टिममा खेल्ने वाचा गरे । उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने चासो बढ्यो ।
जस्टिनका बुबा प्याट्रिक क्लाइभर्टको गोलमा एसी मिलानलाई हराएर आयाक्सले सन् १९९५ को च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो । आयक्सको पछिल्लो युरोपेली उपाधि त्यही हो । अर्को वर्ष पनि आयक्स फाइनल पुगेपनि उसलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि रक्षा गर्ने पहिलो टिम हुनबाट युभेन्टसले रोक्यो । एड्गर डेभिड्स, क्लाइभर्ट, क्लारेन्स सिडोर्फलगायत आधा दर्जन खेलाडी ठूला क्लबतिर लागेपछि १९९७ को सेमिफाइनलमा आयाक्सले युभेन्टसलाई समग्रमा ६–२ ले नतिजा सुम्पिएको थियो ।
त्यसैले अविश्वसनीय रुपमा युरोपा लिग २०१७ को उपविजेता भएको आयाक्सले फेरि गतिलो प्रदर्शन गर्ने सोचिएको थिएन । यो सिजन च्याम्पियन्स लिगको नकआउटमा रियल म्याड्रिड र युभेन्ट्सलाई सिकार बनाएर आयाक्सले दुई वर्षअघिको प्रदर्शनलाई युरोपमा फेरि उदाएको संकेत भएको सावित गर्‍यो । रियलले गत वर्ष फाइनलमा युभेन्ट्सलाई हराएर कीर्तिमान १३ औंपल्ट युरोपेली उपाधि कब्जा गरेको थियो । दुवै क्लबलाई यो सिजन आयाक्सले स्तब्ध बनायो ।
आयाक्स आम्सटर्डममा भएको अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा रियलविरुद्ध २–१ ले पछाडि परेको थियो । उसले म्याड्रिडमा भएको दोस्रो लेग ४–१ ले कब्जा गर्दै रियलको लगातार चौथोपल्ट च्याम्पियन बन्ने सपना उडाइदियो । क्वाटरफाइनलमा आयाक्सले प्रतिद्वन्द्वी पायो, युभेन्ट्स । लगातार आठौंपल्ट इटालियन च्यिाम्पियन बन्ने संघारमा आइपुगेको ‘ओल्ड लेडी’ हावी हुने अनुमान गरिएको थियो । दुई घन्टा (दुई लेग) को खेल त्यस्तो भएन । आम्सटर्डममा १–१ भयो । टुरिनमा २–१ को जित निकाल्दै आयाक्स २२ वर्षपछि च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल पुग्यो ।
वास्तवमा रियल र युभेन्ट्सविरुद्ध आयाक्सको जित नसोचिएको नतिजा हो । खेलाडीको स्तर, अनुभव र क्लबको लगानीको आधारमा ती दुई धनाढ्यसँग आयाक्सको तुलनै हुँदैन । यसपाली च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा पुगेका आयाक्सबाहेक अरू सात टिम विश्वकै सबभन्दा धनी क्लबको सूची ‘डेलोइट मनी लिग’ को शीर्ष ११ भित्र छन् । नम्बर १ हो रियल । ११ औंमा छ युभेन्ट्स । रियलले २०१७–१८ मा ७५ करोड नौ लाख युरो र युभेन्टस ३९ करोड ४९ लाख आर्जन गरेको थियो ।
धनाढ्यहरूको प्रतियोगितामा आयाक्सले चमात्कारै गरिदियो । आयाक्सले समूह चरणमा बायर्नविरुद्ध दुवै खेल बराबरी गर्‍यो । जर्मन महारथी बायर्न यस्तो क्लब हो जो पछिल्लो सिजन ६२ करोड ९२ लाख युरो कमाएर डेलोइट मनी लिगको चौथोमा रहेको थियो । आयाक्स धनी क्लबको सूचीमा ३० भित्र पनि पर्दैन । त्यसर्थ उसको कमाई १५ करोड युरो पनि छैन । पछिल्लो सिजन ९ करोड २० लाख युरोको बजेटमा चलेको डच क्लबले पैसाको खोलो बगाइरहेका रियल र युभेन्ट्सविरुद्ध सनसनीपूर्ण खेल देखायो । उसले दुवै टिमविरुद्ध पहिलो लेगमा ४–५ गोल गरेको भएपनि त्यो अन्तर खेलअनुसार न्यायोचित थिएन भन्ने अवस्था थिएन । रियल, युभेन्ट्स र बायर्नको अनुभव र लगानीलाई आयाक्सका युवा खेलाडीको जोसले मत्थर पारिदियो ।
लियोनल मेसी प्रेरित बार्सिलोना चाहिएको बेला उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर युरोपमा म्यानचेस्टर युनाइटेडको हैसियत उदांगो पार्दै सेमिफाइनल पुग्यो । टोटेनहमले स्टार खेलाडीको बर्चस्व रहेको म्यानचेस्टर सिटीलाई रोमाञ्चले भरिएको खेलमा पन्छाउँदै पहिलोपल्ट अन्तिम चारको यात्रा तय गर्‍यो । यर्गेन क्लोपको लिभरपुललाई भने पोर्टोको चुनौती पार गर्न गाह्रो भएन । अब फाइनल प्रवेशको लागि आयाक्सको निशाना बनेको छ टोटेनहम ।
आयाक्सले सेमिफाइनल यात्रा तय गरेसँगै आफ्नो बजेटलाई तीन गुणा बृद्धि गर्ने अवसर पाएको छ । अर्बपति अग्नेली परिवारको स्वामित्व रहेको युभेन्ट्सको सेयर बजारमा च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै १६ प्रतिशतले गिरावट आयो । आयाक्सको सेयर भने ८.५ प्रतिशतले उकालो लागेको ब्लुमबर्गले जनाएको छ । बुधबारको सेयर बजारअनुसार आयाक्स ३४ करोड १० लाख युरोको कम्पनी हो भने युभेन्ट्स एक अर्ब ४० करोडको । रियलबाट क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई भित्र्याएर पनि युभेन्ट्सको १९९६ यता युरोपेली च्याम्पियन बन्ने अभियान फेरि अधुरै रह्यो । उसले शीर्ष ५ लिगबाहिरको क्लबबाट युरोपमा १९८२ यता पहिलो हार बेहोरेको हो ।
आयाक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एडविन भान डेर सार आफ्नो क्लब आर्थिक रूपमा पछाडि रहे पनि फुटबलको लागि ठूलो नाम भएको बताउँछन् । आयाक्स चारपल्टको युरोपेली च्याम्पियन हो । उसले सत्तरीको दशकमा तीन उपाधि जितेको थियो भने त्यसपछि लुइस भान हालले सम्हालेको टिमले १९९५ मा । पछिल्लो सफलतामा भान डेर सार गोलकिपर थिए । मिडफिल्डमा रहेका मार्क ओभरमार्स अहिले आयाक्समा फुटबल निर्देशक ुहन् । यो सिजन आयक्सको यात्रामा यी दुईले एकसाथ खुसी मनाइरहेका छन् ।
मनै लोभ्याउने खालको ‘टोटल फुटबल’ डच प्रशिक्षक मिचेल राइनसले आयाक्समा सन् १९६० को दशकमा सुरु गरेका थिए । उनको रणनीतिलाई मैदानमा उतार्ने मुख्य खेलाडी थिए, योहान क्रुफ । त्यही शैलीमा लोभलाग्दो खेल पस्किदै आयाक्सले १९७१, ७२ र ७३ मा युरोपेली उपाधि उचालेको थियो । नेदरल्यान्ड्स दुईपल्ट विश्वकपको फाइनल पुगेको पनि त्यही शैलीमा हो । राइनस र क्रुफ बार्सिलोना लागेपछि आयाक्स सुस्तायो । क्रुफले प्रशिक्षकको रूपमा टोटल फुटबलको अभ्यास पनि आयाक्सबाटै गरे । पछि बार्सिलोनामा सारे, जहाँ उनका खेलाडी थिए पेप ग्वार्डिओला । ग्वार्डिओलाको ‘टिकी–टाका’ टोटल फुटबलकै परिस्कृत रूप हो ।
प्रशिक्षक एरिक टेन हागले त्यही ‘आयाक्स दर्शन’ लाई फर्काउने प्रयास गरेका छन् । युवा खेलाडीले भरिएको आयाक्स विपक्षीलाई चर्को दबाब दिने, खेलाडीको गति, आक्रमणमा चारैतिर फैलिने, टिमको संरचनालाई पुरै समय टिकाइराख्ने खुबीकै कारण यो सिजन घरेलु लिग, कप र च्याम्पियन्स लिगसहित तीन उपाधि जित्ने अभियानमा अघि बढेको छ । ‘आयाक्सलाई मात्र होइन, च्याम्पियन्स लिगलाई नै राम्रो भएको छ,’ सेमिफाइनल पुगेपछि प्रशिक्षक टेन हागले भनेका छन्, ‘सधैं त्यही ७–८ टिम क्वाटरफाइनल पुग्ने र उपाधि जित्ने प्रतियोगिताको लागि राम्रो होइन । समर्थक यस्तो चाहदैनन् । फुटबलमा आश्चर्य चाहन्छन्, त्यो यो वर्ष हामीले गर्‍र्यौं ।’
युवा प्रतिभा पहिचानको लागि माहिर मानिएको क्लब हो आयाक्स । क्रुफ, फ्रयांक राइकार्ड, डेभिड्स, डेनिस बर्गक्याम्प, क्लाइभर्ट, भान डेर भार्ट, भान डेर सार, मार्को भान बास्टेन, वेस्ली स्नाइडर आयाक्सबाटै उदाएका थिए । जाल्टन इब्राहिमोभिच, लुइस स्वारेजले आयाक्सकै बाटो रोजेका थिए । टोटेनहममा छाइरहेका टोबी एल्डरवेइर्ल्ड, जान भेर्टोगन, डेभिन्सन सान्चेज र क्रिस्टियन इरिक्सन आयाक्सबाटै लन्डन पुगेका हुन् । ११ वर्षको छँदादेखि आयक्समा रहेका डोनी भान डे बिकसहित एकेडेमीबाट आएका ६ खेलाडी युभेन्ट्सविरुद्ध पहिलो रोजाइमा खेलेका थिए ।
रोनाल्डोले युभेन्ट्सलाई दिलाएको अग्रता तोड्दै आयाक्सलाई जिताउन २१ बर्षीय भान बिक र १९ बर्षे कप्तान माथिज डे लिटले गोल गरेका थिए । २१ बर्षीय मिडफिल्डर फ्रेंकी डे जोङ सात करोड ५० लाख युरोमा अर्को सिजन बार्सिलोना जाने पक्का भइसक्यो । डेविड नेरेस (२२) प्रिमियर लिग जाने निश्चितजस्तै छ । मिडफिल्डर हकिम जियेच (२६) लाई ठूला क्लबहरूले चाहेका छन् । उनीहरूसँगै २३ वर्षीय गोलकिपर आन्द्रे ओनाना उत्कृष्ट लयमा छन् । त्यसैले त ‘बेबी आयक्स’ ले युभेन्ट्सलाई पाठ सिकाएको इटालीको चर्चित पत्रिका ला गजेट्टा डेलो स्पोर्टले हेडलाइन नै बनायो ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट क्लब कीर्तिमान एक करोड ४१ लाख पाउन्डमा फर्किएका डिफेन्डर डाले ब्लिन्ड (२९ वर्ष), साउथह्याम्पटनबाट एक करोड पाउन्डमा लिइएका फरवार्ड डुसान टाडिक (३०), मिडफिल्डर लेस सोन (३२) आयाक्सका सिनियर खेलाडी हुन् । प्रिमियर लिगमा चार वर्ष सफल नभएका टाडिकले यो सिजन आयाक्सको ५० गोलमा योगदान गरेका छन् । उनले ३२ गोल र १८ एसिस्ट गरेका छन् । डच लिगसँग प्रिमियर लिगको तुलना हुँदैन । तर, च्याम्पियन्स लिगको ६ गोल र ३ एसिस्टले उनको कौशल पुष्टि गर्छ । युवा र सिनियर खेलाडीको मिश्रणले आयाक्स बलियो देखिएको छ । डिफेन्समा ब्लिन्ड र डे लिट, मिडफिल्डमा सोन र डे जोङको जोडी खुबै चलेका छन् ।
रुसमा विश्वकप २०१८ सकिएको दस दिनभित्रै आयाक्सको च्याम्पियन्स लिग यात्रा सुरु भएको थियो, जति बेला उसले प्रारम्भिक चरणको छनोटमा अस्ट्रियन क्लब स्टुर्म ग्राजको सामना गरेको थियो । त्यसपछि बेल्जियन क्लब स्ट्यान्डर्ड लिगा, युक्रेनी डायनमो किभलाई पन्छाउँदै आयाक्स च्याम्पियन्स लिगको समूह चरण पुगेको थियो । त्यस बेला उसले यति लामो यात्रा गर्ने कसैले अनुमान गरेको थिएन । च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल पुगेपछि चर्चा आयाक्सकै भइरहेको छ ।
Twitter: @ rghising
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०९:२१
अपडेटः मंगलबार, १९ साउन, २०७७ । ०६ : १० बजे